Mitoetra ao Aminy
"Tomoera Amiko ary Izaho aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa hianareo, raha tsy miray Amiko" - Jao. 15:4.
Ilaintsika ny mangataka ny fandrotsahana ny Fanahin'Andriamanitra ho toy ny fanafody ho an'ny fanahy mararim-pahotana. Ireo fahamarinana ivelambelany ,avy amin'ny fanambarana, raha atao mazava sy mora takarina, dia eken'ny maro ho manome izay ilaina rehetra; fa rehefa miasa ao an-tsaina ny Fanahy Masina, dia hamoha ny fanirina lalina hahita ny fahamarinana tsy simban'ny fahadisoan-kevitra. Tsy hijanona ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona tena maniry marina ny hahafantatra ny fahamarinana; satria mamaly soa ny mpikaroka mazoto ny fahamarinana sarobidy. Ilaintsika ny mahatsapa ny hery manova fo avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ary ampirisihiko ireo rehetra nanidy ny fony amin'ny Fanahin'Andriamanitra mba hanokatra ny varavaran'ny fony, ka hitalaho amim-pahamatorana hoe "Tomoera Amiko". Nahoana isika no tsy tokony hiankohoka eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana, ka hangataka ny hirotsahan'ny Fanahin'Andriamanitra amintsika, tahaka ny tamin'ny mpianatra? Hanalefaka ny fontsika vato ny fanatrehany ary hameno antsika amin'ny hafaliana sy firavoravoana, ka hanova antsika ho fantsom-pitahiana.
Irin'ny Tompo ny hampanan-karena amin'ny finoana ny tsirairay avy amin'ny zanany, ary vokatry ny asan'ny Fanahy Masina eo amin'ny saina io finoana io. Mitoetra amin'ny fanahy tsirairay mandray Azy Izy, ka milaza teny fampitandremana amin'ny fo tsy mety mibebaka, ary mampitodika azy ireo amin'i Jesosy, Ilay Zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Mampirehitra fahazavana ao an-tsain'ireo maniry hiara-miasa amin'Andriamanitra izany, ka hanome azy ireo fahombiazana sy fahendrena hanao ny asany.
Tsy mamela na oviana na oviana ny fanahy miantehitra amin'i Jesôsy ho tsy misy mpiahy ny Fanahy Masina. Mandray ny zavatra avy amin'i Kristy Izy, ka maneho izany amin'ilay mpikatsaka. Ary raha mifantoka eo amin'i Jesôsy ny fijery, dia tsy miato ny asan'ny Fanahy, mandra-pahatongan'ny fanahy hitovy endrika Aminy. Amin'ny alalan'ny hery miasa mangina feno fahasoavana avy amin'ny Fanahy, dia miova amin'ny fanavaozana ny saina sy ny fikasana ny mpanota, mandra-pahatongany ho iray amin'i Kristy. Mitombo ny firaiketam-pony amin'Andriamanitra; noana sy mangetaheta fahamarinana izy, ary eo am-pibanjinana an'i Kristy, dia miova avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra, avy amin'ny toetra ho amin'ny toetra, ary lasa tahaka ny Tompony hatrany hatrany. - ST, 27 Sept. 1899.